दिलशोभा प्रकरण र नेपाली पत्रकारिता | नेपाल इटाली डट कम
दिलशोभा प्रकरण र नेपाली पत्रकारिता
May 20, 2014 — nepalitaly
राष्ट्र निर्माता बडामहाराजधिराज पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरणको सिलसिलामा साना राज्यहरु जित्दै काठमाडौं खाल्डो प्रबेश गर्ने क्रममा कीर्तिपुर माथि आक्रमण गरे । बिना रणनीति र जिती हाल्छुनी भन्ने घमण्डले गर्दा त्यो लडाईमा नराम्रो सित हार ब्यहोर्नु पर्यो ।
दोस्रो पटक पनि सफल भएनन तर तेस्रो पटकमा सफल भए । त्यो लडाईमा ब्यहोर्नु परेको पटकपटकको हार अनि आफ्नै भाइ देखि सेनापति सम्मको मृत्युले गर्दा रिसको झोकमा केही स्थानीय मानिसहरुको नाक कान काटी दिए रे भन्ने कथन पनि छ, यो काम जायज थियो वा थिएन ?
तर इतिहासमा दर्ता भएको घटना कहिले काही खिल बनेर बल्झिने गर्छ । बितेको केही महिना राजधानी काठमाडौंमा एउटा घटनाले निकै चर्चा पायो । त्यो घटना सुनियोजित घटाइएको थियो वा थिएन त्यो घटनाको विषयमा खोजपड्ताल गर्नेहरुलाइ नै थाहा होला । ‘आमा घर’ नामबाट समाज सेवा गर्ने एक एकल महिला दिलशोभा श्रेष्ठको विषयमा एउटा समाचारले निकै ठुलो चर्चा पायो ।
समाज सेवाको नाउामा ‘यौनको कारोबार’ देखी ‘बालक खरिद बिक्री’ सम्मको कुरा निस्कियो । घटनाले निकै उग्ररुप लियो । अन्त्यमा सरकारले हस्तक्षेप गरेर जांचपड्ताल गर्ने सम्मको कारबाही गर्नु पर्‍यो । ‘आमा घर’ संस्था दर्ता छैन यो कुरा स्वयम आमा घरकी संचालिका दिलशोभा श्रेष्ठले स्वीकार गरेकी छिन ।
आमा घरमा आश्रय लिएका बालबालिकाहरु विदेससम्म पुर्‍याइएको कुराहरु पनि निस्कियो । आमा घरको संचालिका दिलशोभा श्रेष्ठले क्रिष्चियन धर्म धारण गरेकी छिन र आफ्नो संस्थामा आश्रय लिएका बालबच्चाहरु देखी वृद्ध–बृद्धासम्मलाई नियमित प्रार्थनामा लैजान्छिन । यी सबै आरोपहरु पनि त लागेको हो नि दिलशोभा माथि ।
राजधानी काठमाडौं देखि मोफसलका जिल्लाहरुमा समेत २०४६ साल पछि कमाइको गतिलो साधन बनेको छ ‘समाज सेवा’ भन्ने धन्दा, गरिब देखि बेसाहारा बटुलेर गरिने यो खेती संसारभरकै गरिव मुलुकमा बडो आक्रामक ढंगले फस्टाउदै गएको छ भने नेपाल पनि कसरी अछुत रहन सक्ला र !
दिलशोभा श्रेष्ठले सुरुमा सडकमा बेवारिसे बनेका वृद्ध वृद्धाहरुलाई आश्रय दिंदा कोही कसैले शंका गरेका थिएनन जब तिनले आफ्नो घरमा बच्चा केटाकेटी देखि अन्य वेवारिसे वृद्ध वृद्धाहरु बटुल्दै सामाजिक सेवाको नाम दिएर संस्था चलाउन थालिन तव तिनको संस्थाले चारै तिर ख्याती बटुल्दै गयो । बेवारिसेलाई सहारा दिनु त्यो धर्म र पुण्यको काम हो तर यो कलियुगे जमानामा समाज सेवा त्यसै चल्दैन ।
जब दिलशोभाको संस्थामा बिदेसी मुद्राको असिना बर्सिन थाल्यो तब यो किन र कसरी के हिसावले बर्सिदै छ भन्ने खोजको विषय हुन थाल्यो । बिदेशीले नेपालमा दान त्यसै दिएका छैनन र बिना कारण दिंदा पनि दिदैनन । कुनै गुह्य सुत्र फेला पारेर नै होला पत्रकार के.पी ढुंगानाले यो केशमा हात हालेका तर बुद्धि नपुर्‍याउदाको परिणाम तिनी र तिनलाइ काम दिने मिडिया हाउस ‘नागरिक’ नराम्रोसंग विवादमा फस्नु पुगे ।
माथी सुरुमै मैले उल्लेख गरेको टिप्पणी यो घटनासंग जोड्नुको कारण पनि यहि नै हो । यौन उत्पीडनको कुरालाई जोडसंग चर्चामा ल्याएर घटनालाई बढाई चढाई त गरियो तर घटनाले उग्ररुप लिए पश्चात खुलेका कुराहरु जस्तै ‘बिदेशमा बालकहरु पठाइएको घटना’ छ त्यो घटनालाइ किन दबाइयो ? आफ्नो संस्थामा आश्रय लिएकाहरुलाई धर्म परिवर्तन किन गराईयो ?
संस्था दर्ता नगरिकन बिदेशी सहयोग लिनु तथा दिनु अपराध हो कि हैन ? अनी यस्ता कुराहरु माथि चर्चा नगरेर एकोहोरोरुपमा ‘गोपी कृष्ण कहो’ भन्ने फोन टेप घटनालाई उछालेर अन्य जघन्य घटनालाई गुमराहमा पार्दा चुक्क आवाज ननिकाल्ने हामी नेपालीहरुको सोचनीय शक्ति कत्तिको छ भन्ने कुरा त ‘दिलशोभा’ प्रकरणले प्रस्ट देखाउछ कि देखाउदैन ?
मैले पत्रकार केपी ढुंगाना सहि छ र दिलशोभा श्रेष्ठ गलत छ भनेर भन्न खोजेको हैन तर मासको दालमा कालो अवश्य पनि छ भनेर भन्न खोजेको हु । सरकारको अनुमति बिना बिदेश पुर्‍याइएका ति बालबालिकाहरु को हुन र किन र के उदेश्यका लागि पठाइयो ?
दर्ता नभएको संस्था माथि बिदेशी दान सहयोग आउदा पनि आाखा चिम्लेर बस्नुको कारण पनि त होलानी अनि नेपाल अधिराज्य भरि युद्धस्तरमा धर्म परिवर्तन हुदा तै चुप मै चुप गरेर किन बसिन्छ ? त्यसको जवाफ दिनु पर्दैन ? समाज सेवाको नाउामा बिकृति फैलाउने जोसुकैलाई पनि कारबाही गर्ने हिम्मत चाहि किन गर्दैन यो लोकतान्त्रिक सरकारले ? रह्यो कुरा पत्रकारिताको ।
अधिकांश नेपालको पत्रकारिता भनेको नेपाली जनताहरु जस्तै हल्लाको भरमा खेती गर्ने खेतीवाल हुन् र यिनीहरुलाइ कठै भन्दा अरु के नै भन्न सकिएला तर जबसम्म हल्लाको भरमा तथानाम भन्ने जुन मानसिकता हामी नेपालीहरुले बोकेका छौं । यो हामी नेपालीहरुको लागि एक दिन फलामको चिउरा साबित हुनेछ बेलैमा सबैलाई चेतना भया ।
Source: Nepal Sandesh
« इटालीमा चलचित्र कबड्डी प्रदर्शन हुने
बुबा धनी, लोग्ने धनी, छोरो पनि धनी, आमै पाटीमा भोकै »